Xildhibaano sheegay in Farmaajo ay kula xisaabtamayaan diyaaradii ku dhacday Bardaale | SMC
Home WARARKA MAANTA Xildhibaano sheegay in Farmaajo ay kula xisaabtamayaan diyaaradii ku dhacday Bardaale
Xildhibaano sheegay in Farmaajo ay kula xisaabtamayaan diyaaradii ku dhacday Bardaale
Xildhibaano ka tirsan labadda Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kula xisaabtami doonaan sababta Ciidamo aan qeyb ka aheyn AMISOM oo Itoobiyaan ay gacanta ku haayeen Garoonka Bardaale.
Xildhibaanada ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu dalka soo galiyay Ciidamo ku xadgudub Madax banaanida Soomaaliya.
Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa sheegay in kulamada ugu horeeya ee labadda Aqal ay uga hadli doonaan dhibaatadii ka dhacday Bardaale.
“Madaxweyne Farmajo, hada waan fahaney waxa adiga iyo Abiy Ahmed idinka dhaxeeyo aad BFS iyo umada Soomaaliyeed kaqarineysey inaad usharaxdo laakiin Ilaah ayaa banaanka keeney ceebtaada. Baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaliyeed na waxay qaadi doonaan goaano sharci oo kadhan ah ku xad gudubka madax banaanida dhulka iyo dhiiga Berdaale kudul daadisey” ayuu yiri Senator Ilyaas.
Waxaa uu intaasi kusii daray” Soo gelitaanka Ciidanka Ethiopia ee aan qeybta ka aheyn AMISOM waxay si cad uga soo horjeedaa sharafta iyo madaxa banaanida dhulka Soomaaliyeed.
Previous articleDaawo Shirkadda Dhismaha iyo Qurxinta Guryaha ee Macquul oo deeq gargaar ah gaarsiiyay Haween danyar ah Agoon oo kunool gobolka Shabeelaha Hoose.
Next articleAMISOM oo caddeysay cida soo riday diyaaradii Bardaale ku dhacday